-- देश सुब्बा--
आज ३१ अगस्ट, २०१४ सधैं झैं साहित्यिक श्रृंखला—२८ सम्पन्न भयो । आज गुड्ने समयको कुरा भएन । साइबर समाएर उड्ने समयको कुरा भयो । विशेष गरी हङ्गकङ्गका हाम्रा नानीहरू ज्ञान र विवेकले उडदै गरेको चर्चा गयौं । गौरव लाग्यो । हामीले नामै नसुनेको विश्व विख्यात लेखकलाई साना साना नानीहरूले पुस्तकायलमा गएर पढदा रहेछन् । यो कम्तीमा पनि मेरो मूल्याङकनमा उडने कुरा हो ।
यसरी ज्ञान र विवेकले उडिरहेको यो दृश्यमा तल लट्टाइ समाइरहेका हङ्गकङ्गका नेपाली अभाङ्गगार्ड शिक्षकहरू छन् । अभाङ्गार्ड फ्रेन्च भाषाको Avante garde हो । यसको अर्थ अग्रगामी वा अग्रचेतना हुन्छ । विशेष उल्लेखनीय परिश्रम गर्ने अभाङ्गार्ड शिक्षकमाहरूमा एकराज राई, देवराज राई, अमोद राई, सैलेन्द्रसिं बोगटी, पूर्ण गुरूङ, शारदा गुरूङ्, पसन तमू, चुरा थापा लगायतका केही शिक्षकहरू छन् । उनीहरू यतिखेर नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने पहाड फोडिरहेका छन् । धेरै गाह्रो छ पहाड फोड्न । तर उनीहरूको साहस, आँट पनि बालुवाले बनेको छैन । त्यो इस्पातले बनेको देखें । ढृड र कटिबद्ध भेटें । आज उनीहरूका रजत आवाज श्रवण गर्न पाएँ । उनीहरू हाम्रा हर्षका पात्र हुन् । बिना कर्म हर्ष कपास जस्तो उडेर आउँदैन । हाम्रा आँगनमा हर्ष आउन कर्म गर्नुपर्छ । आदरणिय गुरूगुरूमाहरूले उध्याइरहेका छन्, धारेहात । लाग्छ हिँडेरै काटने छन्, ती तागाराहरू । हामीले काँधमा काँध मिलाएको भए अवश्य फोडी सक्थे पहाड । काँध मिलाउन नसकेकोले नै पहाडले छेकेर उभेको छ ।
फ्रान्समा दोस्रो विश्व युद्धपछि समाजका विकृत बढार्न नवीन चेतना बोकेर केही युवाहरू आए । उनीहरूसित भएको नवीन चेतनाले बाल्यो समयको उज्यालो किरण । पछि यी नवीन चेतनाधारी एकलव्यहरूलाई मानिसले अभाङ्गगार्डको पगरीले सम्मान गरे । उनीहरू नै थिए, हल्लिन्दै आउने समयलाई समाएर सोझाउने । त्यसैले विश्वले उनीहरूलाई अभाङ्गगार्ड भनेर सम्झिरहेका छन् । हङ्गकङ्गमा अथक संघर्ष गरिरहेका शिक्षकहरू प्नि यसमा अर्थ अभाङ्गगार्ड हुन् ।
समय उडने र गुडने कुरा हुँदा म विश्वका एक महान् साहित्यकारलाई सम्झिरहेको थिएँ । उनका साना साना पुस्तक छन्, तर त्यही पुस्तकले थाहै नपाइ विश्वका पाठकहरूको मुटु छुएर गएको छ । मुटुलाई सुम्सुमाएर जाने यी लेखकलाई कसले बिर्सन सक्छ ? ती लेखक आफ्नै मुटुसँग सम्बाद गर्दै पार्क र समुद्र किनार जान्थे साथैमा हुन्थ्यो छायाँ । छायाँसितै हात समाएर डुलिरहन्थे । यस्तै भेटिन्छ उसको साहित्यमा । उनै महान् लेखकको महान् पुस्तक “दि प्रोफेट” भन्ने छ । त्यसमा पनि समय गुडने र उडने चर्चा छ । म यहाँ सन्दर्भ जोडन खोजिरहेको छु श्रृंखलालाई । त्यो पुस्तकमा नानीहरूको बारेमा संवाद छ । त्यो संवादले आजभन्दा करीब दुई वर्ष अगाडि नै हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई अचानोमा राखेर माड हानेको छ । हामी भन्छौं–“नानीहरूले, सन्तानले बाबुबाजेको इज्जत, नाक थाप्नु पर्छ । बाबुबाजेजस्तो हुनुपर्छ ।” यही नै हाम्रा कालो मान्यता । यसैको विस्वास गढेको छ हाम्रो मान्यतामा ।
जसले यस विस्वासलाई आत्मसात गरे, ऊ आज्ञाकारी भयो । जसले उडन खोज्यो, ऊ अ–आज्ञाकारी । एक ध्यान बस्नुपर्ने यहाँ छ, एक व्रत बस्नुपर्ने यहाँ पनि छ । आखिर हामी कहाँ छौं । हाम्रा विस्वास, बुझाइ कुन झाडीमा छ । के हामीलाई बेर्ने झार पनि पन्छाउन सक्दैनौ ? हाम्रा समाज, व्यवहार यस्तै झिक्राझिक्री बेरिएर रूग्न भएको छ ? यसको औषधि लेखेका थिए ती लेखकले । ती खलिल जिबानले । उनको पुस्तकमा यसो भनिएको छ– “नानीहरूले बाबु बाजेजस्तो हुने होइन, बाबुबाजेको पाइला पछयाउने होइन । यसरी पुर्खालाई पछयायो भने उनीहरू धेरै पछि पर्नेछन् । बरू आमाबाबुले नानीहरूलाई पछयाउने । नानीहरूलाई मात्र पछयाउँदा बाबुआमा दुई पुस्ता अगाडि जानेछन् ।” यो युगमा यो अति सान्दर्भिक छ ।
लामो समय भएको थियो मैले श्रृंखलामा पाइला नटेको । यसका पर्खाल केही भत्तिएको देखें । रंग पनि उडेको देखें । किन्तु भित्रको चूर झन्झन् मजबुत बन्दै गएको देखें । चैते आँधीले हल्लाउन सक्दैन भन्ने ठानें । यस्तै बिरूवा केही साथीभाइ मिलेर धेरै वर्ष लगाएका थियौं । त्यहाँबाट धेरै बिरूवा उम्रे, हुर्के र उडे । उनीहरूको भौतिक शरीर उडेन, उनीहरूको सुगन्ध उड्यो । यस पटकको दृश्य अर्कै थियो । नानीहरू स्लाइडमा बोलिरहेका, शिक्षकहरू स्लाइडमै पढाइरहेका । कति ज्ञानबर्धक, कति एडभान्स प्रणाली । कागतमा कालो अक्षर पढिरहेका हामी कता स्लाइडमा अमेरिकन टिभी च्यानलले प्रसारण गरेको राहुल र पूजाको जीवन । ती चलचित्रलाई नानीहरूले निबन्धमा साहित्यमा उतारेको । नानीहरूको हृदयमा छछल्किरहेको नेपालीपन स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनीहरूमा जागिरहेको नेपाली साहित्य, भाषा सिक्ने भोक । हामीप्रति तेर्सिएको आशावादी अनुहार साह्रै स्रहानीय लाग्यो । देवराज राईको कलात्मक प्रस्तुती, अमोद राईको पाठयक्रमबारेको जानकारी बोधगम्य थिए ।
पर्खाल भत्किएको, रंग उडेको, झयाल ढोका भत्केको यस श्रृंखलामा मैले कसैलाई केही सिकाइनँ । मैले सिकाउने कुरा पनि के छ । मैले धेरै सिके नानीको पाइलाबाट, शिक्षक, क्षिशिकाको पाठबाट । खण्डरलाई थामेर उभेकी दीपा एवाई राईलाई देखें । समयलाई चुनौति दिईरहेको आँखा हेरें । मैले सानो बोलें फिलोसोफी अफ फियरिज्मबारेमा । विद्यार्थीिले सदुपयोग गर्ने भयको बारेमा । त्यही मन्त्र ठूलोले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भने । साहित्य श्रृंखलाको यो नवीन र आकर्षक श्रृंखला थियो । यो श्रृंखला विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यकार, पत्रकार सबै अटाएको एउटा बडेमाको हृदय थियो । म पनि एउटा कुनामा अँटाएको थिएँ । धन्य साहित्यिक श्रृंखलालाई जसले पसिना रोपेर फूल उमार्ने कोशिश गरिरहेको थियो ।